+17 amagama amahle kakhulu olimini lwethu | Izincwadi Zamanje
+17 amagama amahle kakhulu olimini lwethu
Isithombe - Wikimedia / Eloimanlleu
Ulimi lwethu, iSpanish, lunothile oluyingqikithi okungekho olunye ulimi olungaziqhayisa ngalo. Ukusho into efanayo singasebenzisa inqwaba yamagama ahlukene ... Mhlawumbe ngenxa yalesi sizathu, kunzima kakhulu kubantu bakwamanye amazwe ukuthi bafunde ulimi lwethu nemisho yalo ehlukene esinayo cishe yonke into.
Namuhla ku Izincwadi Zamanje, sifuna ukubukisa ngolimi lwethu futhi sikwenza ngo +17 yamagama amahle kakhulu olimini lwethu. Zijabulele! Sengivele nginayo intandokazi yami kubo bonke… Nawe?
1 Ukukhethwa kwamagama amahle aseSpain
2 Amanye amagama amahle aseSpain
2.15 Ukubuyisela emuva
2.19 Ukushukuma komzimba
2.23 I-Tiquis miquis
3 Imvelaphi yeSpanishi
Ukukhethwa kwamagama amahle aseSpain
Umsindo omnandi ngokweqile, othambile noma obucayi.
Okuthile okumangazayo kangangokuthi ngeke kuvezwe ngamagama.
Intekenteke ngokwedlulele futhi ilula, into evela kulo mhlaba.
Isimo sengqondo sokungazithandi sokuheha kothando komuntu oyedwa komunye.
Ukuthola ngenhlanhla nokungalindelekile okwenzeka lapho ufuna okunye.
Lapho amafu eba bomvu lapho ekhanyiswa yimisebe yelanga.
Into ebonakalayo lapho ithoni lokukhanya lihluka ngokwakha uthingo oluncane.
Ubuciko bokukhuluma ngempumelelo ukujabulisa noma ukuhambisa.
Lokho okuhlala isikhathi esifushane kakhulu.
Ukuthi ngeke ibune.
Amanye amagama amahle aseSpain
Okuqhubekayo, okungapheli, lokho akunakhefu.
Kusho isifiso esinamandla sokuthile okuthile okuphathekayo kwenzeke.
Impahla yomzimba ukukhipha isibani esibuthakathaka, kepha ibonakale ebumnyameni.
Ukuzwa ubuhlungu, ubumnene kanye nokuhlonza ngezifo zomunye umuntu.
Ukuthi ayinayo futhi ayinakuba nokuphela noma ukuphela.
Isimo sokuhlukaniswa noma ukuvalelwa ngasikhathi sinye siphelele.
Amandla okuvumelanisa isidalwa esiphilayo nomenzeli ophazamisayo noma isimo esingesihle noma isimo.
Usizi olungacacile, olujulile, oluzolile nolunomphela, oluzalwa ngezimbangela zomzimba noma zokuziphatha, okwenza ukuthi labo abahlushwa yilo bangatholi injabulo noma ukuzijabulisa nganoma yini.
Amagwebu kunoma yiluphi uhlobo loketshezi.
Ukukhanya kokuqala kosuku ngaphambi kokuphuma kwelanga.
Ukukhanya okuthambile, okubomvana okuvela ngaphambi kokuphuma kwelanga.
Kuyisenzo sokuba neqiniso futhi ube neqiniso kuwe. Umuntu othembekile ngumuntu okwaziyo ukuhlukanisa okuhle kokubi futhi asebenzise imisebenzi yabo yansuku zonke ebaholela ekutheni bahambisane "nezinkambiso" zomphakathi.
Ungumuntu onganikeli nganoma yini emphambukisayo endleleni yakhe. Ingasetshenziswa futhi ezindaweni.
Ungomunye wamagama amahle kakhulu kusilulumagama saseSpain ngoba futhi ungumuntu esimthanda kakhulu empilweni yethu. Kodwa-ke, akudingeki ukuthi iqondwe "njengowesifazane obeletha ingane", ngoba omama abaningi bangabantwana babo noma bengazalanga.
Kusho ukunikeza umuntu okufana nalokho lowo muntu asinikeze khona. Isibonelo esihle kulokhu kungenzeka kube uthando, ngoba phakathi kwezithandani uthando nothando kuyinto ephindayo.
Igama elithi Saudade lisho ukulangazelela, futhi lihlobene nenganekwane. IRoyal Academy yoLimi lwaseSpain (RAE) iluchaza ngokuthi "isizungu, isifiso, ukulangazelela." Noma kunjalo, kungaphezulu kakhulu kwalokho.
Yize isetshenziswa eSpain (kuncane kakhulu ngoba ayaziwa kahle), kuyigama lesiPutukezi, futhi empeleni imvelaphi yayo (kanye nenganekwane) ihlobene namaPutukezi, ayeyisebenzisa ngenkathi bekwelinye izwe hhayi kwakungeyabo futhi babekhumbula ikhaya labo nabathandekayo.
Igama "lesiSpanish" elengeziwe lizoba "morriña" ukuchaza into efanayo.
Ithemba yisimo sengqondo, umuzwa okwenza ungalahli ukholo lokuthi into oyifunayo izokwenzeka. Noma themba umuntu (noma isenzo) ukuthi abe nomphumela oyifunayo.
Yigama elaziwayo elincane, kepha, lisetshenziswe ngeSpanish. Manje, incazelo yalo ngeyokuthi "uhlanzekile noma ukhululekile ezintweni ezingadingeki." Inkinga ukuthi intsha eningi iyisebenzisa ngenye indlela, ngegama elithi "I mondo", elingasho into efana nokuhleka ngokusobala ngokuthize.
Kungumzamo, wokunyakaza, noma oyingxenye yomzimba, wokufuna ukwenza okuthile. Kepha ngaphandle kokwenza empeleni.
Ngokuya ngeRAE, kungukuthambekela, ukwenziwa lula, umusa nokwethembeka, kungaba ngesimilo kanye / noma ngokuziphatha. Yize kungelona igama elingu-100% leSpanishi, ngoba livela eFrance, liyasetshenziswa eSpain.
Ekuqaleni livela esiGrekini, yigama elichaza umuntu ophuphayo kepha abone okungokoqobo.
Leli gama lisho ukungaphazami, ukuthula. Iqoqwe kuRAE futhi ivela esiGrekini.
Umuntu onomqondo omncane ngumuntu onokwesaba ngokwenza okuthile, kepha ukuthi lokhu akubalulekile, nokuthi abanaso ngempela isizathu sokwenza lokho.
Wake wakwanga? Impela uyakwenza, ngoba kusho ukwanga kothando noma inhlonipho. Eqinisweni, ezikhathini zasendulo leli gama lalisetshenziswa kabanzi, futhi livela esiLatini, osculum.
I-Trabzon inezincazelo eziningana okufanele wazi. Ngakolunye uhlangothi, kufana kakhulu nokuthi "ukungcola" kungaba. Kuyinto yokulwa namazwi noma izenzo (izimpi ezijwayelekile ezinomsindo). Kepha futhi inencazelo enhle ngokwengeziwe. Futhi ukuthi, okuhlobene nolwandle, yilokho okubizwa ngaleso sikhathi lapho amagagasi amancane ewela ngezindlela ezahlukahlukene futhi akhiphe umsindo ongazwakala buqamama.
I-Acme siyazi ngekhishi lomkhiqizo elivela emakhathuni. Kepha i-acme, evela esiGrekini, yamukelwa yi-RAE futhi iza isho isikhathi sokuqina kakhulu kwesifo, noma umzuzu ophakeme womuntu.
I-Jipiar isho ukusho i-hiccup, ukububula, ukukhala; okungukuthi, sikhuluma ngesenzo salezozenzo. Kepha kungasho futhi ukucula ngezwi elifana nokububula.
Kukangaki bekutshela ukuthi "amaqanda" ahambisana no-h kanye no-v. Futhi bazoyimaka kangaki bengazi nokuthi kukhona igama, ukuthi livela esiLatini, nokuthi libhalwe ngaphandle kuka-h no-b. Yebo, i-uebos ikhona. Inkinga ukuthi akusho okufanayo nokwangaphambili, kepha kungukubhekisa kusidingo.
Leli gama elixakile empeleni lisho ukuba nobuqili, ikhono, nobubi empilweni. Lokho wukuthi, umuntu owazi ukubhekana nempilo yonke ngendlela ephumelelayo.
ISpanishi yakhiwa ngamagama ayizinkulungwane. Ngokuqondile, kwi-RAE amagama angaphezu kwama-93.000 ayaziwa (unyaka ka-2017), futhi unyaka nonyaka kufakwa amagama amasha (yize amanye amaningi enyamalala).
Bambalwa kakhulu abazi imvelaphi yeSpanishi, noma isiCastilian, kanye namagama awakhayo. Kepha lokho sizokuxazulula kalula.
Futhi yilokho siyazi ukuthi iSpanish sivela esiLatin, njengasePortugal, Catalan, Galician, French, Italian noma Retro-Roman. Njengoba wazi, iRoma yanqoba iningi leNhlonhlo Yase-Iberia futhi, ngenkathi lo mbuso uwa, yize isiLatin sasilahlekile, empeleni okwenzekile yilokho laguqulwa laba ngolimi olusha, lokho okubizwa nge- «Castilian romance», lokho kwanda kusuka eMbusweni waseCastile kuye kuyo yonke inhlonhlo ngeNkathi Ephakathi.
Empeleni, lapha kulapho iSpanish sivela khona, kusuka esiLatin esingcolile, lokho okwakulahleka njengoba uMbuso WaseRoma wanyamalala emazweni aseSpain. Kodwa-ke, bekungeyona "eyesiLatini" ngempela, ngoba ibemukela namagama avela kwezinye izilimi, ikakhulukazi isiGrikhi, isiJalimane, noma isiCelt.
Ngempela ulimi lwaseSpain luqale ngonyaka we-1200 futhi lukhokhelwa iNkosi u-Alfonso X, owathi ngaphansi kokuyala kwakhe waqala ukubhala imisebenzi ngesiCastilian, ngaphezu kokuhumushela abanye abaningi kuleloSpanishi, ngaleyo ndlela esiza ukwenza isiCastilian ulimi "olusemthethweni" lwaseSpain.
Iqiniso ukuthi, uma sibheka emuva, amagama amaningi amadala aseSpain alahlekile ngenxa yokungasetshenziswa, amanye amaningi ayasixaka, futhi kwesinye isikhathi sisebenzisa amagama anencazelo ehluke ngokuphelele kulokho esifuna ukukusho. Okusinikeza umbono wokuthi iSpanish siyinkimbinkimbi kanjani.
Iliphi kulawa magama eliyintandokazi yakho? Ngabe unenye engekho kulolu hlu futhi oyithanda kakhulu?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » +17 amagama amahle kakhulu olimini lwethu
UJairo rodriguez kusho
Sanibonani, ngibonga kakhulu ngalesi sihloko. Kuyigugu, yize kuphindaphindwa kuwebhu (okungenani ingxenye yokuqala, amagama ayi-10 amahle kakhulu).
Ngibamba iqhaza nalokhu kuphawula, ngenxa yesizathu esithile, ngiyisazi sezilimi futhi nginesibopho sobungcweti sokunikela okuthile kwabanye maqondana nendawo yangakithi. Well, Carmen othandekayo, ngiphakamisa ngenhlonipho enkulu ukuthi wenze isichasiselo encwadini yakho, ngegama elikhethekile, igama elithi "limerencia", elingavunyelwe ukuthi likhona ngolimi lweSpanishi, kunalokho kukhona kuphela okushicilelwe kuwebhu, lapho kube khona ukuhumusha okungalungile kolimi lwesiNgisi nalapho kucatshangelwa khona igama elithi imvelaphi, okungukuthi "umkhawulo" futhi okucashunwe kuphela kwizifundo zokusebenza kwengqondo hhayi okunye, okufana nokuthi i-Dictionary of the Spanish Language , futhi iSichazamazwi SamaMelika asisifaki; Lokhu kusho ukuthi akuyona ingxenye yolimi lwesiSpanish ngaphansi kwanoma yiziphi izimo zezilimi, kepha icashunwa ngokweqile ngamakhasi amaningi ewebhu ngendatshana oyishicilele.
Ekuphetheni, igama elithi "limerencia" aliyona ingxenye yolimi lweSpanishi, ngoba alizange lakhiwe yinoma yimuphi uchwepheshe kwezolimi, kungakhulunywa kangako ku-DLE. Akuyona into ngaphandle kwegama elihunyushwe ngokungaqondakali ngomunye umsebenzisi kuwebhu (kufaka phakathi umbhali wendatshana ku-Wikipedia).
Ngakho-ke ngicela ukuthi ukuphawula kwami ​​kungathathwa njengesimangalo noma isenzo sokuzikhukhumeza, kodwa njengesiphakamiso esivela kothile ophila ngolimi.
Phendula uJairo Rodríguez
URicardo Medina kusho
Isichasiselo esihle kakhulu.
ULuis Duque kusho
Ngaphezu kokuphawula okuhle nokuhloniphekile kukaJairo Rodríguez, cishe kungumsebenzi ukuqaphela ukuthi elinye lamagama aqokonyiswe kule ndatshana, njengeResilencia, alinjalo, kepha iResilience ibhaliwe ...
Ngicabanga ukuthi kukhona igama elibhalwe kabi.
Ukuqina, hhayi ukuqina. Incwadi ngilahlekile. Noma ngicabanga kanjalo.
Ukubingelela nokubonga ngokwabelana ngalesi sikhala.
UMarc Moreno kusho
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, ngiyakuhalalisela, noma kunjalo, ngiyazivumela ukuthi ngenze umbono, into eyiyo eyi-Resilience, hhayi i-Resilence, njengoba kushiwo lapha; ngaphandle kwalokho, ukushicilelwa kunothisa kakhulu.
Igama engilithandayo lingu-nefelibata, awu, ngiyindoda ephuphayo ehlale ikhubeka ngokoqobo ...